သားရေး၊သမီးရေး | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
သားရေး၊သမီးရေး	အခုဘာလေးမွေးမလဲ။ သားလေးမွေးမလား ၊ သမီးလေးမွေးမလား။ သားသမီးကံကောင်းမလား။
သားတွေက အကျိုးပြုမလား။ သမီးတွေက အကျိုးပြုမလား။
ကလေးကျန်းမာရေး ချူချာနေတာ ဘာယတြာတွေ လုပ်ရမလဲ။
ဒီကလေးကို မွေးစားချင်တယ်။ မိဘကို အကျိုးပြုပါ့မလား။ ခုထက်ထိ သားသမီး မရသေးဘူး။ ရနိုင်ပါဦးမလား။
ဘယ်နေ့သားသမီးက မိဘကို အကျိုးပြုမလဲ။ <br /> 23 comments on “သားရေး၊သမီးရေး”	သိန်းထိုက်စိုး on August 27, 2010 at 9:38 am said:
ဆရာရဲ. ဗေဒင်အဖြေအရ သားလေးမွေးမယ်လို.သိရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ.
တိုက်ဆိုင်လို.အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ် သားလေးမွေးခဲ့ရင် ဆရာဆီမယ် နံမည်ပေးမယ် ဆရာ
Thardarmaung on September 17, 2010 at 6:46 pm said:
သမီးချောချောလေးတစ်ကယ်မွေးခဲ့ရင် နာမည်ပါ ပေးပေးပါဦးဆရာ
Nandar Aung on October 13, 2010 at 10:06 am said:
Sanda on October 20, 2010 at 10:52 am said:
ကျွန်မက 3.7.1973(အင်္ဂါ)၊ အမျိုးသားက 28.7.1972 (သောကြာ)ပါဆရာ။ ဒုတိယသားသမီးရနိုင်၊ မ၇နိုင်သိချင်လို့ပါဆရာ။နံပါတ်က 23 ပါ။
Aye Nandar Lwin on November 12, 2010 at 8:55 am said:
ဆရာ ကျွန်မတို့ ကလေးအခုထိမရသေးလို့ ဒီမှာမေးတာ ကလေးရမယ်လို့ပြောတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်မဒီမှာပဲထပ်မေးပါရစေရှင် ကျွန်မက (24.12.1978)(Sunday) အမျိုးသားက (3.3.1982)(Wednesday)ပါဆရာ ကျွန်မတို့ ကလေးရနိုင်၊မရနိုင်သိချင်လို့ပါဆရာ ဒီမေးခွန်ကိုပဲထပ်မေးရတဲ့အတွက် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ရှင် ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာတွက်ပေးပါ
Htay Htay Hlaing on November 15, 2010 at 2:09 pm said:
ဆရာ ကျွန်မတို့ကလေးအခုထိမရသေးလို့ပါ ကျွန်မက(21.12.1974)(စနေ) အမျိုးသားက(10.11.1968)(သောကြာ)ပါဆရာ ကလေးရနိုင် မရနိုင်သိချင်လို့ပါဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး တွက်ပေးပါ။
myo myo on November 16, 2010 at 10:03 am said:
ဒီပိုစ့်လေးကို လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Phyu Phyu on February 20, 2011 at 1:58 pm said:
သားသမီး မရနိုင်ဘူး ပြောတယ် ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးပေးပါဆရာ။
may si on April 25, 2011 at 4:32 pm said:
ကျွန်အမျိုးသားနံမည်ကဗေဒါပါ ကျွန်မတိဲုရဲ့သားလေးနံမည်ပေးကို သူ့အဖေနံမည်ပါ ခည့်ပေးချင်လို့ နံမည်ပေးပေးလို့ရမလား၇ှင့် ..သားသားက ၁၃ရက်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၀ စနေသားလေးပါ နံနက်၇ နနာရီမှာမွေးတာပါ…
KPPS on July 14, 2011 at 2:33 pm said:
နောက်ထပ်ကလေးရနိုင်ဦးမလား၊ သားသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ထွန်းကားမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းထည့်ရေးပေးပါ။
myintmyat on January 10, 2012 at 4:21 pm said:
အရမ်းမှန်တယ်၊ ကျွန်မ သမီးလေးအရမ်းလှတယ်။
Aung Cho Oo on February 4, 2012 at 7:49 am said:
ဆရာ့ဗေဒင် က လက်ဖျားခါလောက်အောင်ကို မှန်တယ်ဗျာ
ဒီလိုင်းကို တင်ထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ…
Sal@comm on March 12, 2012 at 11:19 pm said:
ဆရာ ကျွန်မတို့ ကလေးအခုထိမရသေးလို့ ဒီမှာမေးတာ ကလေးရမယ်လို့ပြောတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်မဒီမှာပဲထပ်မေးပါရစေရှင် ကျွန်မက (19.11.19800 )( Wednesdayအမျိုးသားက ( 28.9.1982)(Tuesday)ပါဆရာ ကျွန်မတို့ ကလေးရနိုင်၊မရနိုင်သိချင်လို့ပါဆရာ ဒီမေးခွန်ကိုပဲထပ်မေးရတဲ့အတွက် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ရှင် ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာတွက်ပေးပါ
pwint on April 9, 2012 at 5:07 pm said:
မင်္ဂလာပါဆရာ….ကျွန်မအခုကိုယ်ဝန် ၈ ပတ်ရနေပါပြီဆရာ…အမွှာလိုချင်ပါတယ်ဆရာ ..အမွှာမရလဲ သားဦးလေးလိုချင်ပါတယ် ..ဆရာ..အခုဆရာဝန်ကခွဲမွေးရမယ်ပြောထားပါတယ်..ကျွန်မရဲ့ သားအိမ်မှာရေကြည်အိတ်ပါရှိနေလို့ ပါဆရာ..ကလေးမွေးဖွားရာမှာလွယ်ကူပါ့မလားစိုးရိမ်လို့ ပါဆရာ..ကျွန်မရဲ့ ဇာတာလေးကိုစေတနာဖြင့်ကြည့်ပေးပါဆရာ ..ကျွန်မ မွေးနေ့02.03.1989 ကြာသပတေးသမီးပါဆရာ …ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
nwe nwe on April 21, 2012 at 7:19 am said:
muyar on April 29, 2012 at 8:49 am said:
i can’t read answer. pls, help me
u myo zaw win on May 21, 2012 at 12:53 pm said:
ဆရာဆီကလေးနံမည်ပေးချင်တာဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာemail နဲ့ ဖြေပေးပါခင်ဗျား
thida khaing on May 25, 2012 at 11:52 am said:
ကျမက သောကြာသမီး(၂၁.၇.၁၉၇၈)၊ အမျိုးသားက စနေ(၂၁.၁၀.၁၉၇၈)၊ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သမီးက ၅ နှစ်သမီးလေးပါ
နောက်ထပ် သားလေးတစ်ယောက်လောက် ရချင်ပါတယ်
ရနိုင်။ မရနိုင် သိပါရစေရှင့်
Sal@comm on June 2, 2012 at 3:27 pm said:
ဆရာ ကျွန်မတို့ ကလေးအခုထိမရသေးလို့ ဒီမှာမေးတာ ကလေးရမယ်လို့ပြောတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်မဒီမှာပဲထပ်မေးပါရစေရှင် ကျွန်မက (19.11.1980 )( Wednesdayအမျိုးသားက ( 28.9.1982)(Tuesday)ပါဆရာ ကျွန်မတို့ ကလေးရနိုင်၊မရနိုင်သိချင်လို့ပါဆရာ ဒီမေးခွန်ကိုပဲထပ်မေးရတဲ့အတွက် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ရှင် ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာတွက်ပေးပါ
yekyawwin on July 1, 2012 at 10:52 am said:
tintinhtwe on January 29, 2013 at 2:11 pm said:
ဆရာ ကျမက အိမ်ထောင်ကျတာ2လကျော်ပါပြီ..အခုမေးတာ အားနည်းနေတာကိုကျပါတယ် ခွဲစိတ်ပြုလုပ်ရမယ်ပြောပါတယ်….ယတြာလေးပေးပါနော်….
YinYinHtun on February 8, 2013 at 5:25 pm said:
ဆရာ သားလေးမွေးမယ်ဆိုလို့အရမ်းပျော်သွားပြီ အမျိုးသားက သားလေးလိုချင်တာလေ သာသနပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေချင်လို့တဲ့လေ
phyo phyo Zin on April 7, 2013 at 7:56 pm said:
သားလေး တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။နောက် ထပ်ကလေး တစ်ယောက်လောက် ထပ်ယူချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဘယ်တော့ လောက် ရနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်။
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,618)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,346)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,198)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,015)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,045)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,357)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,183)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,696)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,734)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,394)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,149)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,455)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,398)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,019)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,743)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,742)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,289)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,772)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,148)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,083)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,036)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
1 User Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.